Tababar maalgashiga ku saabsan oo maanta ka furmay xarunta Rugta ganacsiga iyo wershedaha Puntland ee Boosaaso [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Business / International Busines / Tababar maalgashiga ku saabsan oo maanta ka furmay xarunta Rugta ganacsiga iyo wershedaha Puntland ee Boosaaso [Sawiro]
January 21, 2012 - By: Moha Salat
Waxaa maanta xarunta rugta ganacsiga iyo wershedaha Puntland ee Boosaaso ka bilowday tababar mudo labo maalmood ah socon doona oo ay si wada jir ah isula wadaan Rugta ganacsiga iyo Bankiga Dahabshiil.
Tababarkan oo ah mid lagu baran doono Maalgashiga Islaamiga ah waxaa ka qayb gelaya in badan oo kamid ah ganacsatada Puntland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Boosaaso oo iyadu ah caasimada dhaqaalaha ee Puntland.
Munaasabadii tababarkan lagu furayey oo ka dhacday hoolka shirarka ee xarunta rugta ganacsiga waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Rugta iyo Bankiga caalamiga ah ee Dahabshiil oo xaruntiisa 2-aad dhowaan magaalada Boosaaso laga furay.
Ugu horey waxaa goobta ka hadlay islamarkaana tababarka si toos ah u furay Gudoomiye ku-xigeenka 2-aad ee rugta ganacsiga Maxamed Caydiid Jaamac wuxuuna u mahad celiyey shirkadda Dahabshiil oo uu sheegay inay dadaal xoogan ku bixisay sidii nidaamka Bankiyada ee Islaamiga ah dalka looga hirgelin lahaa.
Mr Caydiid ayaa dhinaca kale ganacsatada iyo dhamaan qaybaha kale ee bulshada Puntland ku booriyey inay Bankiga Dahabsiil la shaqeeyaan si loo gaaro horumar dhaqaale oo taaba gal ah, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Gudoomiye ku-xigeenka 2-aad ee Rugtu ugu baaqay maamulka shirkada Dahabshiil inay xooga saaraan sidii ay ay horumarka iyo arimaha bulshada uga shaqeyn lahaayeen.
Gudoomiyaha Bankiga caalamiga ah ee Dahabshiil faraciisa magaalada Boosaaso Prof. Yaasiin Xaaji Cabdilaahi oo isna intaas kadib hadalka qaatay ayaa faah faahiyey ujeedada ay tababarkan usoo qaban qaabiyeen iyo sababaha ku dhaliyey shirkadda Dahabshiil in xiligan ay tababar noocan oo kale ah ganacsatada u qabato.
Wuxuuna sheegay in ujeedada ugu weyni ay tahay sidii ganacsatada loogu dhiiri gelin lahaa inay maal gashi samaystaan loona fahansiin lahaa adeegyada uu bangigu qabanayo oo uu Prof-ku sheegay inay yihiin kuwo Bankigu keligiis aanu ribix ku dooneyn balse ay bulshada oo dhan dani ugu jirto.
Gudoomiyaha Bankiga Dahabshiil ee Boosaaso Yaasiin Xaaji Cabdialahi ayaa ugu danbeyntii sharaxaad ka bixiyey adeegyada ay qabtaan iyo faa’iidooyinka ay leeyihiin wuxuuna hadalkiisa kusoo afmeeray in mar walba ay macaamiishooda mudnaanta siinayaan ganacsataduna ay yihiin qayb kamid ah macaamiisha ku xiran sidaas darteedna ay qaadayaan talaabo walba oo ay ku wanaajiyaan xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada.
Si kastaba ha ahaatee tababarka maanta hoolka shirarka ee rugta ganacsiaga iyo wershedaha Puntland ee Boosaaso ka furmay oo ah mid lagu baran doono Maalgashiga Islaamka ku salaysan islamarkaana mudo labo maalmood ah socon doona waxaa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga oo kaashanaysa Bankiga Dahabshiil.